PITA na karama Manufacturers - China PET Bottles Factory & Suppliers
Epeepe plastik efu
Anyị elu mma efu plastic karama bụ n'ụzọ zuru ezu recyclable, fechaa na nri ọkwa mma. PET bụ plastik nke nwere ugegbe yiri iko, nke zuru oke maka ịkwalite ọtụtụ ngwaahịa. Ihuenyo doro anya nke iko na-enye ndị ahịa gị ohere ịhụ ọdịnaya - yabụ ọ dị mma maka ịdebe mmiri mara mma ma ọ bụ mmiri mmiri.
N'ihi oke ịdị arọ ya Epeepe plastik efu imewe, ọ bụ nkwakọ ngwaahịa na-akwụ ụgwọ ma na-adigide dị na ahịa. Ihe ngwọta ọsụ ụzọ a na-ekwu maka ahịa mmiri maka obere karama PET, ọkachasị ndị na-emepụta ihe na-achọ ịkwalite nkwakọ ngwaahịa na mmepụta ihe ha.
Nke anyi Epeepe plastik efu dị iji zụta nnukwu nhọrọ nke mmechi. Nke a na-agụnye ụdị plastik ma ọ bụ okpu aluminom niile nwere ma ọ bụ na-enweghị eriri.
Nri nri PET karama
Shanghai COPAK bụ ọkachamara soplaya maka nri nchịkọta dị ka nri ọkwa PET karama, nri ọkwa PET iko, nri ọkwa PET food containers na PLA ngwaahịa. Emi odude ke Shanghai, echekwa obodo china, anyị nwere ọtụtụ ejiji echiche makaNri nri PET karama. Ogologo njem ụgbọ mmiri dị mma, na usoro mmepụta kachasị elu.
Ndị ahịa maara nke ọma na China nwere ike ịma na, Shanghai nwere ụkpụrụ kachasị sie ike maka nrụpụta nchịkọta nri nri. Companylọ ọrụ si Shanghai inkarama ọkwa karama ubi ga-abụ nke kachasị mma. Si ihe na-ahọpụta mmepụta na ngwugwu, niile usoro na-okokụre na ájá free omumuihe. Ndị ọrụ anyị niile na-etinye okpu na uwe aka mgbe ha na-arụ ọrụ igwe. Anyị akpaka mmepụta edoghi makanri ọkwa PET karama ma mee ka ndị ọrụ nwee aka. Gbaa mbọ hụ na ndị ọrụ enwechaghị ohere ịkpọtụrụ ngwaahịa. Don'tkwesighi iche gbasara ogo ahụ. Ma n'otu oge ahụ anyị nwere mgbe ahịa nkwa iji hụ na ikike gị.
Nri nri karama plastic
Abịa n’ịchọpụta na ịmepụta ihe Nri nri karama plastic, ọ dị oke mkpa ịghọta ma a na-ewere plastik dị ka ihe nchekwa ma ọ bụ na ọ bụghị. Ọtụtụ gọọmentị na-ewepụta iwu gbasara plastik ọkwa nri. Na Canada, Health Canada na-elekọta ụkpụrụ ndị a. Na United States, Nchịkwa nri na ọgwụ ọjọọ (FDA) na-emepụta ụkpụrụ. n'agbanyeghị nke ahụ, ha nwere ihe ndị a chọrọ. Plastic nri ga-agbaso ụfọdụ ụkpụrụ nke ịdị ọcha. Ọ nweghị ike ịnwe akwa, ihe mgbakwunye ndị ọzọ ma ọ bụ ngwaahịa plastik elegharịrị elere anya na-emerụ mmadụ ahụ. Plastic ọkwa nri nwere ike ịnwe ụfọdụ ọkwa nke ihe eji emegharị emegharị ruo ogologo oge ihe ndị ahụ dabara na ntuziaka na ụkpụrụ ụlọ ọrụ na-achịkwa iwu depụtara.
French karama square
Nke anyi French Square Clear karama bụ ezigbo ngwakọta nke ịma mma & ọrụ. Nzube nchekwa nchekwa ha bụ ọkacha mmasị n'ihi na ọ bụghị naanị na-ebuli ohere nchekwa kamakwa ikike ịhụ ọdịnaya na akara. The square ahu na-enye ohere maka karama ndị a na-ohere-oru oma maka mbupu na ịchekwa.
PET French Square ọkpọ Njirimara profaịlụ akụkụ anọ pụrụ iche, nke a na-ejikarị maka ngwaahịa nri na ngwa nri ndị ọzọ. A na-ejikarị ha arụ ọrụ Mmiri ara ehi, mana ha nwekwara ike ịba uru na ịchekwa mmiri mmiri ndị ọzọ dị ka ụtụtụ, syrups, na sauces na maka solids dị ka DIY mixes, rubs, na ngwa nri. Ha ga-eme ngwugwu mara mma maka inye onyinye.
Na French square plastic bottle si COPAK bụ ụzọ dị egwu iji gosipụta ihe ọ juụ yourụ gị, smoothies, lemonades, kọfị nwere akpụrụ mmiri, na ihe ọ otherụ otherụ ndị ọzọ na-enye ume ọhụrụ! Ogwe French na-ezo aka na karama nwere ahụ square na ubu Oblique.The variants ndị a dị iche na ịdị elu, imewe olu, obosara na okpu.
OEMODM PITA karama
OEM na-anọchi anya nrụpụta akụrụngwa mbụ na ODM na-anọchi anya Designrụpụta Ngwaahịa. Nke a kapịrị ọnụ ma mesịa mepụta ụlọ ọrụ ọzọ maka ire ere. Lọ ọrụ ndị a na-ekwe ka ụlọ ọrụ ahụ rụpụta na-enweghị itinye aka na nzukọ ma ọ bụ na-agba ọsọ nke ụlọ ọrụ mmepụta ihe. A na-eji ha eme ihe na nchịkọta nri, ihe ịchọ mma, nlekọta onwe onye, ​​ọgwụ na ọtụtụ ndị ọzọ.
Anyị bụ ndị ọkachamara na emeputa maka PET karama na iko maka nri nchịkọta. Enwere ike itinye karama na iko PET maka ihe ọveraụveraụ na ihe ọ juiceụ juiceụ. A pụkwara ịkọkọ kọfị, ice cream, teal, mmiri ara ehi, mmiri ara ehi, smoothies na mmanya ndị ọzọ. A na-ejikarị ha eme ihe na ụlọ mmanya, ụlọ ahịa nri ngwa ngwa, ụlọ ahịa ndị dị larịị na ihe ndị ọzọ. Anyị nwere ihe ịga nke ọma na-akwadoOEM / ODM PITA karama nwere ọtụtụ agbụ ma ọ bụ ụlọ ahịa ndị ama ama dịka STARBUCKS, KFC, BLUEFROG, MC na ndị ọzọ.
Polyethylene terephthalate, ma ọ bụ PET, bụ ngwakọta eji arụ ọrụ nke ịme ọtụtụ ụdị karama plastik. Ọ dị ezigbo mkpa ịmara na karama mmanya PET abụghị otu BPA (bishenol-A).
Karama ihe ọ beụverageụ enye a doro anya, na-abụghị streaky imecha na-inogide na a elu ọkọ na elu mebisie eguzogide. Polyethylene terephthalate plastic na-ejikarị maka nri na karama ihe ọ asụ asụ n'ihi na ọ bụ nke isiike na ịdị arọ dị mfe. A karama PET karama ga-egosipụta ngwaahịa gị nke ọma,
Ọ bụrụ na ị nọ n'ime ihe ọverageụverageụ ma ọ bụ mmanya, PET onunu karama ke china bụ nhọrọ mbụ gị. N'etiti ndị na-eweta ihe ọverageụverageụ PET na china, COPAK ga-abụ onye ị nwere ike ịtụkwasị obi.
Shanghai COPAK Mmeputa Co., LTD. Na nkpirisi "COPAK".
COPAK bụ ọkachamara na-emepụta maka PET iko NA PET mmanya na karama na china. Ebe anyị nọrọla n'ọhịa a ọtụtụ iri afọ, anyị nwere rich ahụmahụ mn na-ewepụta ngwugwu ọkwa nri. Anyị nwere ebe obibi na-enweghị ntụ maka iko na karama.
N'ịbụ onye a pụrụ ịdabere na karama plastic emeputa, COPAK mgbe niile na-eme ike anyị iji mezuo arịrịọ si ahịa anyị.
Anyị na-enye ogo dị elu PET ihe ọ cansụverageụ ihe ọ cansụ .ụ nke ejiri ihe siri ike mee iji hụ na afọ ojuju sitere n'aka ndị ahịa anyị
COPAK PET ihe ọ cansụverageụ ihe ọ cansụ .ụ ejiri karama PET mee na mkpuchi Aluminom Easy Open; olu si 6oz-20oz.
Ma uzo ma ebipụta ma ọ bụ ihe mmado PITA mmanya na-egbu egbu dị. Anyị nwere imewe otu na ejiji n'elu gị họọrọ. A na-akwadokwa mmepụta omenala.
PET Ihe onunu
PET ihe ọ .ụ .ụ akpa bụ ìhè, enweghị ike iwepu na, n'ihi uru ndị a, dị ọtụtụ ebe.
A na-ahazi akpa CETAK PET maka ihe ọ suchụveraụ dịka mmiri ọ drinkingụ plainụ nkịtị, mmiri ara ehi, kọfị, tii, Smoothie, ihe ọ juiceụ juiceụ na ihe ọ softụ softụ dị nro. Anyị nwere ihe ọ clearụverageụ PET dị ọcha na ihe ọverageụverageụ PET. Cylinder PITA karama, Square PET karama, mmanụ a bearụ bear karama, PITA Cancer, PITA POP CANS, PET Boston karama na na.
Ihe niile COPAK PET ihe ọ .ụ .ụ akpa na-arụpụtara na ájá free omumuihe na izute mba nri ọkwa ụkpụrụ. Anyị bụ ndị a pụrụ ịdabere na ya na-emeputa ihe na-enwe zuru okè aftersales ọrụ usoro. A ga-edozi mkpesa gị niile.
The PITA karama bụ nnukwu nhọrọ maka nsacha, kemịkalụ ụlọ, mmanụ mmanu, ụlọ mposi, ahụike na ngwaahịa mara mma, confectionery, mmanụ / sauces oriri na ndị ọzọ. Ọ nwere ike ịhapụ ịma mma nke ngwaahịa gị.
Anyị elu mma, doro anya PITA karama plastic bụ n'ụzọ zuru ezu recyclable, fechaa na nri ọkwa mma. PET bụ plastik nke nwere ugegbe yiri iko, nke zuru oke maka ịkwalite ọtụtụ ngwaahịa. Ihuenyo doro anya nke iko na-enye ndị ahịa gị ohere ịhụ ọdịnaya - yabụ ọ dị mma maka ịdebe mmiri mara mma ma ọ bụ mmiri mmiri.
COPAK Industries bụ ndị isi na ihe onunu Packaging Ngwọta Na China.